Maxaan U Taageersanahay Hannaanka Faderalka,Qalinkii Ibarahm Aden | Puntlandi.ca
Home Maqaalka Aqristaha Maxaan U Taageersanahay Hannaanka Faderalka,Qalinkii Ibarahm Aden
Maxaan U Taageersanahay Hannaanka Faderalka,Qalinkii Ibarahm Aden
Waxaa Qoray: Garaad Axmed Jaamac on October 28, 2017.
Arintaas ilaa maanta oo waqtigaas laga joogo 600 oo sano ka badan kama aanan gudbin. Waraysi uu siiyay BBC-da wasiirki hore ee maaliyada Soomaaliland sanadi 2009-ki ayaa la waydiiyay sababta ay dadka caadiga ah canshuurta ooga qaadi la’yihiin waxaa uuna ku jawaabay “nabadda aynu haysano ayaan waayaynaa haddii aan canshuur qaadid bilowno”. Waxaa xusid mudan in Soomaalidu deeqsiyaal yihiin, xoolo badan dhiibaan kuwooda tabarta yarna taageeraan balse sababta ay u diidayaan inay canshuurta bixiyaan ayaa ah inaysan ogolayn in loo yeeriyo waxa ay bixinayaan iyo cidda ay siinayaan taasoo caqabad weyn ku ah dowlad dhexe oo shaqayso.
Imaamka waxaa soo xigay Sayyid Maxamed isaguna kuma uusan guulaysan inuu mideeyo soomaalida inkastoo uu ku hamminayay in ilaa Nayroobi calan soomaaliyeed oo mid ah uu ka babbado. Marki uu xaqiiqsaday in riyadiisi aduunka aysan run noqon waa isagii lahaa “Hadaan waayay calan leey nashiro tan iyo Nairobi, Miyaan waayay maamuus janniyo daalac iyo naasil. waxaa si weyn loo rumaysanyahay in sababti Sayyidka looga horyimid ay ugu muhiimsanayd in qabaaillada qaar u arkayeen nin xukun doon ah oo rabo inuu iyaga dhulkooda ku xukumo. Ilaa maanta waxaan maqalnaa dad leh wuxuu rabay inuu boqortooyo kuwa carabta oo kala ah ka samaysto dhulka soomaaliyeed
Adduunku waagi hore kama jirin dowlad dhexe ee waxaa uu ahaa gobollo iyo dagmooyin daris ah oo dan wadaag ah. Qaabka hadda wadamada aduunku u dhisanyihiin kama wayno 200 sano inta badan adduunkana 100 sano ka yar ayay dowlad dhexe leeyihiin. Hadda waxaa adduunka oo dhan ka socdo kacdoon ah la yiraahdo “maamul hoosaad”. Maammul hoosaadku waa in gobal walba u madax bannaanaado danahiisi gaarka ah iyo horumarinta dadkiisa. Kiinya oo daris nala ah 2010-ki ayay qaadatay, dowladaha reer Galbeedkuna aad ayuu ugu faafayaa. Tusaale dalka Ingiriiska gobal iska daaye dagmo dagmo la maamul ah ma jirto mid walba iyadaa dagsato qorshaheeda horumarineed.
Haddi aynu ka shaqayno si toosanna aan u qaadanno faderalka, dalkeennu wuxuu noqon dalka ugu horumarsan geeska Afrika ama Afrika oo dhan. Waxaan yeelan doonnaa todobo caasimadood oo aan kala dhicin, mid walbana iskeed isu hormariso. Caasimadahaas waaweyn waxay ka qaybqaadan isu dheeli tirka dadka ku nool waddanka oo had iyo jeer Xamar isugu tago. isu dheeli tirnaanta shacabku waxay horseedi kobac dhaqaale oo lagu nasto sidaa darteed waxaa yaraan colaadaha ka dhasho baahida iyo adeeg la’aanta.
Sidoo kale, waxaa lagu soo rogay af-qoomiyadeed qolo walbana waxaa lagu yiri afkiinna wax ku bartana, ku shaqaysta iskuna maamula sidaa darteed qofka Oromada ah ee aan ku hadal afka Tigreega kama uu shaqayn karo dhulka Tigreega. Arintaan waxay keentay in la waayo wax mideeyo dadka ku nool dalkaas. Qolo walbana waxay ku taamaysaa inay midda kale ka go’do ama ay guumaysato. Intaas waxaad ku darsataa in Itoobiya waligeed guumaysi dhexdeeda ah ay ku jirtay. Sadexda kun ee sano ee ay sheegtaan inay xadaarad lahaayeen waxaa dalkaas ka talin jiray labo qabiil oo kaliya (Tigree iyo Amxaaro) inta kalana guumaysi arxan darro ah ayay ku jireen; sidaa owgeed inta badan dadka Itoobiya ku nool waa xornimo doon.
Dalkeenu wuxuu hadda kasoo baxayaa mushkilado daba dheeraaday, burbur dhaqaale, dowlad la’aan sababtay qax iyo gaajo sidaa darteed kama soo kaban karno dib u dhac kale. way fiicnaan lahayd inaan yeelanno dowlad mid ah, hal meel laga xukumo, si siman dadka ugu adeegto oo aan wada hoos harsanno. Laakiin ma maquuto inaan taasi heli karno, horayna uma dhicin. Gabar caqli badnayd oo lala soo baxay ka dibna la waayay wadaad mehriyo ayaa laga sheegay inay tiri “haddi sheekh la waayay ma loo nin la’aan” marka haddii aan waynay sidaan rabnay xalku wuxuu haboonyahay inaan hagaagsanno middaan la hurayn ee nolol noo horseedi karto.